बमजनमाथि थप अनुसन्धान गर्न एक जना पक्राउ, को हुन उनी ? — Imandarmedia.com
बमजनमाथि थप अनुसन्धान गर्न एक जना पक्राउ, को हुन उनी ?
काठमाडौं । तपश्वीको भेषमा अनुयायीलाई बेपत्ता र हत्या गरेको आरोप लागेका रामबहादुर बमजनमाथि अनुसन्धानका क्रममा एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुलीले अनुसन्धानका क्रममा कमलामाई–८ का इन्द्रबहादुर स्याङ्तानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनी बमजनको सिन्धुलीस्थित आश्रममा बस्छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुलीका एसपी रामेश्वर यादवले उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको पुष्टि गरे । उनीसँगै गोपाल योञ्जन पनि आश्रमबाट प्रहरी कार्यालयमा आएका छन् । प्रहरीले यसअघि सिन्धुपाल्चोकमा रहेको बमजनको आश्रममा छापा मारेको थियो । त्यहाँ अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको दाबी गरिएको थियो । हाल बमजन सिन्धुलीकै आश्रममा रहेको बताइँदै आएको छ ।
कसरी बने बमजन ‘मैत्रेय बुद्ध’ ? उनको रामकहानीबारे बिस्तृतमा पढ्नुहोस्
देश विदेशबाट आएको पैसा र ‘मैत्रेय बुद्ध’ को नाम प्रयोग गरेका बमजनले चलाइरहेका आश्रममा कुनै ध्यान, तपस्या र ज्ञानको कुरा भने हुँदैन। बरु ती आश्रममा नाबालिग आनीहरुको श्रम र यौन शोषण तथा हिंसा र हत्याको लामो श्रृंखला चलेको छ। यति धेरै आश्रम, यति धेरै अनुयायी, यति धेरै हिंसा, अत्याचार र यौन शोषण मच्चाएका रामबहादुर बमजन राज्यको राडारबाट पूरै बाहिर छन्। यो रामकहानीसेतोपाटीबाट साभार गरिएको हो
विप्लव खोज्ने बहानामा पूर्वजनमुक्ति सेनामाथि धरपकड गर्दै सरकार
ुपाखण्डी’ रवि लामिछानेलाई साइबर अपराधमा कारवाही गर्नुपर्छ – वाइसिएल अध्यक्ष दीपशिखा
संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार, अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी